Booliska Kenya oo baadigoobaya 3 maxbuus oo ka baxsaday xabsiga Kamiti Maximum | Dayniile.com
Home Warkii Booliska Kenya oo baadigoobaya 3 maxbuus oo ka baxsaday xabsiga Kamiti Maximum
Booliska Kenya oo baadigoobaya 3 maxbuus oo ka baxsaday xabsiga Kamiti Maximum
Booliska Kenya ayaa baadigoobaya 3 maxbuus oo ku eedaysnaa argagixisanimo oo ka baxsaday xabsiga Kamiti Maximum – kaas oo lagu tilmaamo xabsiga ugu adag dalkan Kenya.
Hay’adda dambi baadhista Kenya ayaa daabacday sawirrada saddexdan qof, waxayna ku yaboohday lacag dhan 550,000 oo doollarka Mareykanka ah, taasoo abaalmarin ahaan loo siin doono ciddii keenta xog sahlaysa in lasoo qabto.
Waxaa la sheegay in xalay 1-dii habeenimo ay baxsadeen.
Dadka baxsadka ah waxaa ka mid ah Maxamed Cali Abiikar oo lagu helay danbi ah in uu ku lug lahaa weerarkii Jaamacadda Gaarisa ee sanadkii 2015-kii oo ay ku dhinteen 148 qof. Waxa uu xabsiga ku jiray 41 sano.
Dadka kale ayaa kala ah Musharraf Abdalla, oo ay booliisku sheegeen in la xidhay sannadkii 2012-kii, kaddib markii uu fashilmay isku day la doonayay in lagu bar-tilmaameedsado xarumaha baarlamaanka Kenya, iyo Joseph Juma Odhiambo oo loo yaqaan Yuusuf oo laga soo qabtay xuduudda Soomaaliya ee Beled xaawo. Booliska ayaa sheegay inuu doonayay inuu ku biiro Al Shabaab.
Previous articleDacwad oogaha militariga Libya oo ka codsaday guddiga doorashada inay joojiyaan musharaxnimada Saif al-Islam Gaddafi.
Next articleSheekh Maxamed Kulmiye oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee caanka ka ah dalka oo cabasho ka gudbiyey Taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawaa Yuusuf Raage,
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Danjire Maxamuud Axmed Nuur ayaa qaabilay safiirka dalka Koofur Afrika u qaabilsan Soomaaliya H.E. Mninwa Johannes Mahlangu. Labada safiir...
Maxay yihiin caqabadaha ku horgudban Hormar Ay sameeyaan Bangiyada Soomaalida.
Jubbaland oo shaacisay doorashada 14 Kursi